EX - ABSDF: November 2013
ဘယ်သူ့ဂရုစိုက်ရမှာလဲ ငါတို့အခုရောက်နေတာ အရက်သောက်ဖို့နဲ့စိတ်အချဉ်ပေါက်ဖို့ပဲကောင်းတဲ့ ခေတ်ကြီး အခါကြီး သမယကြီဲး
ဦးသန်းရွှေချောင်ပိတ်မိနေပြီဆိုတာ သေချာလောက်တယ် ၊ Ye Yint Nge shared Hawdeka Khalaylay's photo.
ဦးသန်းရွှေချောင်ပိတ်မိနေပြီဆိုတာ သေချာလောက်တယ် ၊ စစ်ရေးအမြင်နဲ့ပြောရင် ဦးရွှေမန်း မရှိတုန်းလုပ်ချလိုက်တာဟာ
သမ္မတနဲ့ကာချုပ်တို့ရဲ့ နာမည်ကို သုံးပြီး ဦးသန်းရွှေက အာဏာသိမ်းလိုက် တာပဲ ၊
ကြေငြာချက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ ဦးသန်းရွှေ လက်ဦးမှု ရသွားတယ်ပေါ့ ၊ ဒါပေမယ့်
ဦးသန်းရွှေက လက်ဦးမှုရသွားတယ်တာပြောတာ အားကမပါလာတော့ဘူး ၊
အရွေးခံရသူများ စုပြီး စကားပြောကြရာတွင် ကျွန်တော်က ဒေါက်တာနိုင်အောင်အား
“ကိုနိုင်အောင်၊ ကျွန်တော်တို့စခန်းမှာ ဆရာဝန်ဆိုလို့ ခင်ဗျားတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်၊ ရဲဘော်တွေလည်း သေတဲ့သူတွေ သေပြီး ဖျားတဲ့သူတွေလည်းဖျားနေပြီ၊ ကုမယ့် ဆရာဝန်မရှိဘူး၊ ညီလာခံတက်ဖို့က အရေးကြီးသလား၊ ရဲဘော်တွေ အသက်ကယ်ဖို့က အရေးကြီးသလား ခင်ဗျားဆုံးဖြတ်ပါ၊ ကျွန်တော်သာ ခင်ဗျားလို ဆေးပညာတတ်ရင် ညီလာခံ မတက်ဘူးနေခဲ့မယ်” ဟု အများရှေ့တွင် ပြောသည့်အခါ ကိုနိုင်အောင်က “ကျွန်တော်နေခဲ့ပါ့မယ် မလိုက်တော့ပါဘူး” ဟု ပြောပြီး ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှထွက်ပြီးနေခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်က ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံး တစ်ချိန်ချိန်တွင် ကျောင်းသားတပ်မတော်၏ဥက္ကဋ္ဌများ ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု တွေးပင်တွေးဖူးကြမည်မဟုတ်ပါ။
ကိုနိုင်အောင် ထိုကဲ့သို့ အသိတရားရှိရှိနှင့် ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သည်ကို လက်ခံပြီးနေခဲ့သည့်အတွက် ထိုအချိန်က ကျွန်တော်သူ့ကို ရဲဘော်များ ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင် လေးစားခဲ့သည်။
အမေရိကန် တခွင် ကျေးဇူးတော်နေ့ ဆင်နွှဲ Read more »
နေပြည်တော်ရှိ သရဲခြောက်သော လမ်းမကြီး Ye Yint Nge shared Hawdeka Khalaylay's photo.
နေုပြည်တော်ကြာပန်းအဝိုင်းအနီးရှိ လမ်းမကြီးတစ်ခုတွင် ညစဉ် လှိုဏ်သံများကြားရပြီး အဝေးမှ ကြည့်လျှင် လူအုပ်ကြီးချီတက်လာသလိုလို
များမြင်နေရကြောင်း သူရဲခြောက်တာဖြစ်မည် ထင်ကြောင်း နေပြည်တော်ဒေသခံများအကြား ပြောဆိုနေကြသည် ၊
ဒေါ်စုသြစတျေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့တွင် ယနေ့ပြောသွားသောမိန့်ခွန်းတွင် အခြေခံဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ အဓိကကျသောအချက်ကို ထောက်ပြပြောဆိုသွားခဲ့သည်။ ဒီမိုကရေစီကျသောအခြေခံဥပဒေတခု၏ အဓိကစံနှုံးမှာ လိုအပ်လာလျှင် ပြည်သူလူထုအများစုဆန္ဒဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အခြားနိုင်ငံများ၏အခြေခံဥပဒေများ သည်လည်းလိုအပ်သလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ကြတာဖြစ်သည်။ Read more »
ဆိုဗီယက် နဲ့ တရုတ်တွေ ကွာတာက ဆိုဗီယက် တွေက မာ့က်စ် စိတ်ကူးယဉ်တာမဖြစ်နိုင်ဖူး ဆိုတာကို နားမလည်ခဲ့ဖူး။ လူတန်းစားတိုက်ပွဲကမထွက်နိုင်ဖူး။ အပြင်က စူပါပါဝါ ဆိုပြီး ဟန် လုပ်နေပေမဲ့ အတွင်းမှာ အဆံမရှိဖူး။ စီပွားရေး က ချူန်းချုန်းကျနေပြီ။ တိန်က လျှင်တယ်။
Min Kyaw Khine တကယ်တန်း ကျနော်တို့အုပ်စုကြီး ဓနိတောရွာကနေ ခရီးဆက်ကြတုန်းက ခြေလျှင်ခရီးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး၊ ကုန်တင်စက်လှေတွေနဲ့ပါ၊ မွန်ပြည်သစ်တပ်ဖွဲ့က ပင်လယ်ပြင်ကုန်သည်တွေဆီကနေ ချောဆွဲလာတဲ့ ကုန်တင်စက်လှေ ၆ စီးနဲ့ပါ၊ စက်လှေတွေကတော်တော်ကြီးပါတယ်၊ Read more »
ရာဇာဓိ ရာဇာ ၁၉၄၆ ခု၊ ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီခွဲတွင် ကန်တော်ကလေး မြူနီစီပယ်ကျောင်း၌ ကျင်းပသော ဗမာနိုင်ငံ လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းဆရာမျာ ညီလာခံတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တက်ရောက် ပြောကြားသော မိန့်ခွန်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ဗမာပြည် ဗမာတိုင်း၏ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အချိန်မမှန်ကြသည်ကို တွေ့ရကြောင်း။ ဤကဲ့သို့
ဖြစ်ရခြင်းမှာ လည်း ကျွန်နိုင်ငံ ဖြစ်နေသည့်အတွက် ပညာရေး စနစ်ညံ့ဖျင်းခဲ့ရာ အချိန်နှင့် စည်းကမ်းကို ရိုသေရမည့် အလေ့အ ထများ၊ အသိဥာဏ်များ မ၀င်စားခဲ့ကြရကြောင်း။
အမှိုက်သရိုက် အန်ဖတ် ဒိုက်သရောတွေကို တိုက်စား ဟိုး…ရေပြင်နက်နက်ဆီယူဆောင်သွားဖို့
စက်တင်ဘာလ၂၀ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မှထွက်ခဲ့ပြီး ဘီလူးကျွန်းတွင် နှစ်ည၊ နောက်၂၃ ရက်နေ့တွင် သံဖြူဇရပ်ရောက်ပြီး ထိုမှစတင်ခရီးထွက်လာရာ ရက်ပေါင်း ၂၀
ခန့် ကြာနေသော်လည်း ၇ ရက် ခရီးဟုဆိုသည့် ဘုရားသုံးဆူသို့ မရောက်နိုင်ဘဲ တောတွင်းတွင်သာ တစ်လယ်လယ်နှင့်ရှိနေခဲ့ရာ ဗိုလ်ကြီးစိုးမြင့်ကို မေးရာ လုံခြုံရေးမကောင်းသေးသည့်အတွက် ကေအင်န်ယူ ကလည်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို သူတို့နယ်မြေဖြတ်သန်းခွင့်မပေးဘဲ လမ်းပိတ်ထားကြောင်း ဖွင့်ဟပြောကြားလာသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အစောင့်အရှောက်မယူတော့ဘဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကရင်နယ်မြေ ကို ဖြတ်သန်းရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
မင်းက ညတွေမှာ သွပ်မိုးပေါ်လမ်းလျှောက်တဲ့ကြောင်တကောင် ငါက ညရောက်မှ အသက်ဝင်ခွင့်ရတဲ့ ဖုတ်ကောင်တကောင် အမှောင်မှာပဲတွေ့ကြတယ်
Min Kyaw Khine ကျနော်တို့လဲ ကျောင်းသူနှစ်ယောက်ကို သူတို့ထမိန် ယောင်္ကျားလေးတွေပုဆိုး ကတောင်းကျိုက်သလို ကျိုက်ခိုင်းပြီး ရှေ့ကသူများတွေဖြတ်သလိုသာဖြတ်တော့ဆိုပြီးပြောတော့
သူတို့လဲ ကွိကွိကွကွ အိအိအအ အော်သံတွေနဲ့ မျှော့တောကြီးဖြတ်ကြတာပေါ့၊ ဟိုဘက်ကမ်းရောက်မှ ကျနော်တို့က ပါလာတဲ့ မီးခြစ်နဲ့ မျှော့ကြီးတွေကို အပူမြှိုက်ပြီးခွာချပေးကြရတယ်။
ဟေ့ကောင် အက်ဇေးရှင်း ....
မင်းက တိုက်အိမ်ထဲမှာ စားကောင်းသောက်ကောင်းတွေနဲ့ ဇိမ်ကျကျနေနေရတဲ့ ခွေးဆိုတော့ 2008 ဖွဲ့စည်းပုံကို စိတ်မ၀င်စားတာ အဆန်းတော့မဟုတ်ဘူး။
Htay Win Kyi ကျနော်တို့ မြန်သျန့် (မြန်မာပြည်ကို တရုတ်လိုခေါ်သည်)မှာ လူသန်း၆၀ရှိတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ အဲဒီထဲက ၇၅%က တောင်သူလယ်သမားတွေ။ ၇၅%ဆိုတော့ ၄၅သန်းပေါ့ဗျာ။ ရေးလို့ကောင်းအောင် သန်း၄၀ ပဲထားလိုက်ဗျာ။ အဲဒီတော့ သန်း၄၀ ကိုသာ စည်းရုံးးရေးဆင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် အင်အားအလွန်တောင့် ပါတီဖြစ်တော့မှာပေါ့ဗျာ။ ဟုတ်ဘူးလား။ တနှစ်က မိတ်ဆွေတယောက်က ကျွန်းစိုက်ခင်း ဧကအများကြီး လုပ်ချင်လို့ဆိုပြီး လိုအပ်မယ့်
နည်းပညာဆိုင်ရာစာအုပ်စာပေ အကိုးအကား ရှာဖွေရေးဆင်းတောာ့ ကျနော်လဲ ယောင်ပေပေနဲ့ ပါသွားလေရဲ့။ အဲဒီမှာ ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ စိုက်ပျိုးရေးတုိင်းပြည်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့
မြန်သျန့်နိုင်ငံက စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ research ၊ technical data ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ Read more »
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကမ္ဘောဒီးယား သင်ခန်းစာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးများ
ဒီတပတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ အစီအစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘောဒီးယားလို နိုင်ငံတကာအပေါ် အမှီအခိုကြီးနေရတဲ့ အခြေအနေမရောက်စေချင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက်
နိုင်ငံရပ်ခြား အထောက်အပံ့တွေ အများကြီး လိုအပ်နေတယ်ဆိုပေမယ့် အိမ်နီးချင်း ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ မှာလို နိုင်ငံရပ်ခြား အမှီခိုလွန်နေတဲ့အခြေအနေမျိုး မဖြစ်အောင်သတိပြုသင့်တယ်လို့ "
အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ပေါ် အမေရိကန်စစ်လေယာဉ်ပျံသန်း ငွေစက္ကူအတုထုတ်လုပ်သူများအား ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်
November 26, 2013 at 10:03am ဉာဏ်လှိုင်လင်း၊ အေးမြင့်စန်း နိုင်ငံရေးအရ ပြင်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရင် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးက အလွန်လွယ်ပါတယ် ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ပထမ ငါးနှစ်သက်တမ်း၏ သုံးပုံနှစ်ပုံသို့ ရောက်ချိန်တွင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အရှိန်တင်ကြိုးပမ်းလာခြင်းနှင့်အတူ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး
ဦးတည်လှုပ် ရှားမှုများလည်း ပေါ်ပေါက်လာသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်တို့နှင့် အခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံမှု ပြုလုပ်လို သည်ဟု ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Min Kyaw Khine မွန်ပြည်သစ်ရဲ့ ဗိုလ်မှုးဆိုသူက ကျနော်တို့ တယောက်ချင်းစီရဲ့မျက်နှာတွေကို သူ့လက်နှိပ်ဓါတ်မီးနဲ့ထိုးကြည့်ရင်း ကျနော့်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ ရဲလွင်ရဲ့မျက်နှာကိုလဲ မြင်လိုက်ရော ဟာ..ဆရာပါလား၊ ဆရာ ကျနော့ကိုမမှတ်မိဘူးလား..ကျနော်ထွန်းအောင်လေ ဆရာ.. ဆိုပြီး အံ့သြောဝမ်းသာသွားတဲ့အသံကြားလိုက်ရတယ်၊
-ဒီအုပ်စုကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ လူမှုရေးမျတမှု (social justice) နဲ့ သာမက ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု (public health) အနေနဲ့ ရော စဉ်းစားရမှာပဲ။ Read more »
Min Kyaw Khine ကျနော်တို့ ရန်ကုန်ကနေ ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ကိုထွက်ခဲ့ကြတာ
၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး နောက် ၄ ရက်အကြာ
စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ပါ၊ ကျနော်အပါအဝင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဒသနိကဌာနက ကျူတာ ရဲလွင်၊ နောက် မောင်တူး၊ တခြားဌာနတွေက ကျူတာ ၄ ယောက်အပါအဝင် ပေါင်း ၇ ယောက်၊
စာအုပ် ၀ါသနာအိုးတွေ အတွက် .. အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ Link တွေပါ။ FB ပေါ်က
တွေ့လို့ သိမ်းထားဖြစ် တာပါ။ မူရင်း share တဲ့သူကို မမှတ်မိတော့ဘူး။ စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့သူတွေ သဘောကျမယ် လို့ထင် ပါတယ်။ မာတိကာ သို့မဟုတ် ရှာဖွေရန် (အပေါ်ပိုင်း တွင် အမျိုးအစားလိုက်ရှာနိုင်ပြီး အောက်ပိုင်းတွင် အမည်အတိုင်း ကမှ အ အထိ ရှာနိုင်ပါသည်။)
techniques တွေဟာ သိပ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ဟစ်တလာ ဂျူးးတွေကို လူမျိုးတုန်းသတ်တာ လူတိုင်းသိတယ် မုန်းကြတယ်။ အကြောင်းရင်းက ဟစ်တလာလုပ်ရပ်ကို မဟာမိတ်တွေက တကမ္ဘာလုံးသိစေတယ်။
ရုရှားက စတာလင် ရုရှားမျိုး ၂၄ သန်းကို သတ်တာ အဲဒီအချိန်က ရုရှားတွေ စတာလင်ကို မမုန်းခဲ့ဘူး။
Poe Poe Thu's photo.
အန်ကယ် ဦးထွေးမြင့်ဟာ ၈၈ အရေးတော်ပုံကြီး မတိုင်ခင် ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ သူဖြစ်လို့ ကြိုးဒဏ် သေဒဏ် (၂)ကြိမ်ကျခံရပြီး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုထဲ ပါဝင်လာနိုင်အောင် ထဲထဲဝင်ဝင် အဓိက ပံ့ပိုးပေးခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၈ ၈၈ အရေးတော်ပုံကြီး ကာလမှာ ထွေးမြင့် အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုပြီး သူတို့လက်မှတ်နှစ်ခုနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားများသို့ တိုက်တွန်းချက်ဆိုးတဲ့ ပူးတွဲကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ဖူးပါတယ်။ ဒါဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာဒီမိုကရေစီလောကထဲ တရားဝင် ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံး ထုတ်ပြန် ကြေငြာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အန်ကယ် ဦးထွေးမြင့်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ဦးကျော်ငြိမ်းရဲ့ ယောက်ဖ တော်စပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထူထောင်သူတွေထဲ
အန်ကယ် ဦးထွေးမြင့် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ ဦးသုဝေ ဦးဆောင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပါတီမှာ ဒု ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၈၈ နောက်ပိုင်းလည်း ထောင်နှစ်ရှည်လများ ကျခံရသူဖြစ်ပါ တယ်။ ထောင်ကလွတ်ပြီး နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာ
ဝါရင့် နိုင်ငံရေးသမားကြီးများအဖွဲ့မှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေထဲက
စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်သူ စစ်အုပ်စုနဲ့ အပေးမယူမလုပ်သူတွေထဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ဘီဘီစီ
သတင်းသမားဖြစ်ဖူးတယ်။ ပြည်ပြေးဖြစ်ဖူးတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ အကျဉ်းသား ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အန်ကယ် ဦးထွေးမြင့် ကွယ်လွန်တာ ကျနော် အထူး ယူကြုံးမရ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်။ အန်ကယ် ဦးထွေးမြင့် ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ။
Credit Zaw Win
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာ ကာယကံရှင် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ကြားက၀င်ပြီး “သည်းခံလိုက်ပါ သူကြီးရာ။ သည်းခံလိုက်ပါ သူဌေးကတော်။” ဖြန်ဖြေစေ့စပ်ပေးရုံနဲ့
မရသလို ရွာဦးကဆရာတော် ကျောင်းခေါ်၍ ကြိမ်ဆော်ပြီး နင်တော်နင်တန် ပန်းကန်ကွဲ လက်ဘက်တစ်ရိုး ကွမ်းတစ်ရိုးနဲ့ ကျေအေးပလိုက်လို့လည်း မရပြန်ပါဘူး။ ကြားထဲမှာ အကြောင်းအပေါင်းတွေက အများကြီး ရှိသေးတာကိုး။ ထည့်တွက်ငဲ့ကွက်ဖို့ လိုလာတဲ့အထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကပြေးနေတာကတော့ Geo-politics လို့ခေါ်တဲ့
ပထ၀ီနိုင်ငံရေးကြီးပါပဲ။ တိုင်းရင်းသားချင်းအတူတူ၊ ခံစားချက်ရှိခဲ့တာချင်းလည်းအတူတူ၊ ရခိုင်တွေဆီမှာ လက်နက်ကိုင် သည်လောက်မရှိပဲ၊ ရှမ်းတွေ၊ ကချင်တွေ၊ ကရင်တွေ၊ ကယားတွေဆီမှာ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ ရှိနေရခြင်းအကြောင်းဟာ အဲသည် ပထ၀ီကြောမလွတ်တဲ့ ပယောဂက ထိပ်ဆုံးကပါပါတယ်။ တဘက်နိုင်ငံက အားပေးအားမြှောက်ပြုနေတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ Read more »
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် ရဲ့ EQ နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အမြင်
Ye Min Tun shared Myanmar HR's photo.
၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော် နယူးယောက်မြို့ကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဒါကာမြို့ကို
တာဝန်အရ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဌာနချုပ်မှာ တာဝန်ယူရပြီး အခုလိုဆင်းရဲလှတဲ့နိုင်ငံမှာ တာဝန်ထမ်းဖို့ သဘောတူခဲ့တာကို တချို့တွေက အံ့သြနေကြတယ်။
Tun Lwin မောင်ထွန်းလွင်(မိုးလေ၀သ)
သမိုင်းဆိုတာ တန်ဖိုးကြီးလှတာကို ဒီကနေ့ခေတ်ကာလမှာ ပိုပိုသိလာကြရတယ်။ ဘာပြုလို့လည်းဆိုတော့ သမိုင်းမ၀င်နိုင်တဲ့သူတွေက သမိုင်းဝင်နှိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ သမိုင်းတွေကို ဖျက်ဆီးလာကြတောတွေတွေ့လာကြရလို့ပါဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းပညာရှင်တွေထဲမှာတော့ သမိုင်းပါမောက္ခ ဆရာကြီးဒေါက်တာသန်းထွန်းဟာ သမိုင်းအတွင်ဆုံးပါဘဲ။ သမိုင်းဆရာကြီးရဲ့ သမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့ အဆိုအမိန့်စကားတွေထဲမှာ ကျွန်တော်ကြားဖူးတာလေး အချို့ရှိပါတယ်။
July 28 သမိုင်း မှာ လူပင်လယ်လှိုင်းတံပိုးထ တိုင်းပြည်မှာ ပေါက်ကွဲသံတွေနဲ့ တော်လှန်ကြတဲ့ အချိန် ... Read more »
စာအုပ်ကောင်း တစ်အုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဖတ်သင့်သောစာအုပ်များအနက် ဤစာအုပ်လည်းအပါအ၀င်ဖြစ်ကြောင်းယူဆမိပါသည်။ စာဖတ်ပျင်းသူများအနေဖြင့်အခြားစာအုပ်များမဖတ်ချင်နေပါ သည်စာအုပ်လေးကိုတော့ဖြင့် ဖတ်ကြည့်ပါရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် Admin မြန်မာ စာအုပ်များ http://hngetngaimrokhimisistory.blogspot.com/2013/11/blog-post_6313.html
· စစ်ဝန်ကြီးရုံးတော် နေ့ စွဲ။ ၂၉-၁၂-၁၉၄၄။ အချိန်။ ၃၊ ၃၀ နာရီ။ ကျွန်ုပ်တို့ တပ်မတော်သည် မည်ကဲ့သို့ တပ်မတော်ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို တိုင်းသူပြည်သားအများအား သေချာစွာ သိရှိနားလည်စေရန် အောက်ပါအချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ပြန်လိုက်ရပေကြောင်း။
ဦးခေါင်းတစ်လုံးနှင့် ၀က်နှစ်ကောင် မြိတ်မြို့ ၌ ပေါက်ဖွား
အနည်းဆုံးလုပ်ခ တစ်ရက် ၅၆၀၀ ကျပ်ပေးရန် လုပ်သားများ တောင်းဆို လုပ်ငန်းရှင်များ ၂၀၀၀ ကျပ်သာ ပေးလို ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲကာလအတွင်း နေပြည်တော်တွင် လူစုလူဝေးဖြစ်မည်ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးစိုးရိမ်
နှင်းဆီရောင်တော်လှန်ရေးရုပ်ပုံလွှာ။နေ့က၂၀၀၆ခုနှစ်။ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့။တချိန်ကတက်ကြွလန်းဆန်းခဲ့သော တော်လှန်ရေး ဖြတ်သန်းမှုများကို တစိမ့်စိမ့်စဉ်းစားရင်း အတွေးတွေက တစုံလုံး တော်လှန်ရေး နယ်မြေတခုတည်းမှာ အတူတကွနာခံဖြတ်သန်း ခဲ့ကြသည့် ရဲဘော်တွေအကြောင်း စဉ်းစားနေမိ သည်။၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် ABSDF အဖွဲ့အစည်း ညီလာခံ ကျင်းပပြီး တာဝန်တွေခွဲဝေ ယူကြသည်။ ထိုညီလာခံ ကျင်းပနေချိန် အတောအတွင်း အဖွဲ့အစည်းတွင် မည်သည့် တာဝန် ယူထားသည့် ရဲဘော်ဖြစ်ပါစေ ညီလာခံ ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင်ထိုတာဝန်များရပ်ဆိုင်းထားရသည်။ Read more »
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးပြဿနာ၊ ဘင်္ဂလီပြဿနာနဲ့ ပြည်မက ကုလား-ဗမာ အဓိကရုဏ်းတို့ ရဲ့ တကယ့် ရင်းမြစ်ကို (Gender Issue) လိင်ခွဲခြားမှုရှုထောင့်က ချဉ်းကပ်နိုင်ဖို့ အများကြီးလိုတယ်ထင်မိတယ်...။ ပဋ္ဋိပက္ခတစ်ခုဟာ (Gender Violence) လိင်အကြမ်းဖက်မှု ကို မကိုင်တွယ်သရွေ့ တရားမျှတမှု (justice) ကိုမဖေါ်ဆောင်နိုင်သလို ကြာရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ(lasting peace) အမျိုးသမီးထုရဲ့ ပူပေါင်းပါဝင်မှု မရဘဲမဖြစ်နိုင်ဘူး။ စစ်ပွဲတိုင်း ပဋ္ဋိပက္ခတိုင်းမှာ အမျိုးသမီးထုဟာ တိုက်ရိုက်ရော၊ သွယ်ဝိုက်ရော မလွတ်တမ်း...ထိခိုက်ခံစားရလေ့ရှိလို့ ပဲ...။ လူမှုရေးမျှတမှု (social justice) ဆိုတာ ဒီကမ္ဘာမှာ ဘာသာတရားတွေ ပေါ်ပေါက်လာကတည်းက အမျိုးသမီးတွေ ထောင် စုနှစ်နဲ့ ချီ ခံစားလာခဲ့ရတဲ့ နာလွန်းလို့ ပျောက်သွားတဲ့ အသံပဲ (diminished voice)။
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်၏ "Good Corporate Governance" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောပို့ချချက်
စီးပွားရေး အကြံပေး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်၏ "Good Corporate Governance" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောပို့ချချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံလေးကို အရင်ကြည့်ပါ။ စိတ်ဝင်စားလို့ နားထောင်ချင်သပဆိုရင် အသံဖိုင်လေး ယူထားပါ။ အသံဖိုင် http://sdrv.ms/1cauILl
ရွှေပြည်သာ အလုပ်သမားဆန္ဒပြ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အကူအညီပေးရေးမှာ အခက်အခဲရှိကြောင်း ကုလပြောကြား
အပစ်အခတ် ရပ်ရေး အစိုးရဘက်နဲ့ ကွဲလွဲမှု တိုင်းရင်းသား အင်အားစု ညှိနှိုင်း မိုင်းပွန်စော်ဘွားစပ်စံထွန်း ဟော်နန်း (ရုပ်/သံ)
ဒီကနေ့ အဲလ်ဂျာဇီးယား က Stream Program မှာ အီဂျစ် အကြောင်း ဆွေးနွေးကြတော့ ပညာတစ်ခု..ရလိုက်တယ် အီဂျစ်တပ်မတော် က Muslim Brotherhood ဘယ်လို လှုပ်ရှားသလဲ ဆိုတာကို (သိ) သွားပြီတဲ့ Muslim Brotherhood ကဖိနှိပ်မှုအောက်မှာ အသက်ရှင်အောင်နေပြီး အခွင့်ရတော့ သူတို့ပဲ ရှိတော့တာမို့… ရွေးကောက်ပွဲလည်း လုပ်ရော….သူတို့ပဲ Institution အနေနဲ့ ကျန်တော့တယ်….
Turn On Ideas shared ရာ ဝဏ's photo.
လူကြီးမင်းများ စိတ်မဝင်စားကြဘူးလား ခင်ဗျာ။ ခင်များတို့ မလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်ကို သူလုပ်ပါမယ်တဲ့။ ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီးတော့ကို ကြေငြာတာနော်။ တကယ်ပဲ သူဟာ လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့
ပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ...... ကျုပ်တို့ မဆုံးရှူံးပါရစေနဲ့။ Read more »
-လွှတ်တော် ဒီဘိတ်များ ကျင်းပသည်ဟု သတင်းအချို့ တွင် ဖတ်ရသဖြင့် တယ်ဟုတ်ပါလားဟု အားကျမိ၏။ အခြားတဖက်တွင်လည်း မြန်မာ့ပညာရေးတွင် ဤအလေ့အကျင့်မျိုးပျောက်ကွယ်နေသည်မှာ ၀မ်းနည်းစရာထက်ပို၍ အန္တရာယ်ရှိနေသော အခြေအနေအဖြစ်ရှုမြင်မိ၏။ အမှန်တော့ debate ဟူသည် “စကားရည်လုပွဲ” ဟူသော မြန်မာစကားအဓိပ္ပါယ်ထက်ပို၏။ ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့်ပညာရေးစံနစ်တွင် ဒီဘိတ်သည် ပင်မ
သင်ကြားရေးနည်းဖြစ်၏။ ငါ့စကားနွားရ ပြောဆိုခြင်းနှင့် ငြင်းခုန်မှုကွာခြားသည်ကိုမူ အရွယ်ရောက်သူတိုင်းသိပြီးပင်။
Win Ko November 22, 2013 at 5:02am
ဘ၀တွင် ၀မ်းအကျင့်၊နှုတ်အကျင့် ကိုဖျောက်ရန်ခက်ခဲသည်ဟုဆိုရမည်။ တော်လှန်ရေးနယ်မြေ ကျင်လည်နေထိုင်စဉ်ကာလ ထမင်းကိုသာအားပြုစားသောက်တတ်ကြသည်။
နံနက်(၄)နာရီထိုးသည် နှင့် အိပ်ယာမှထကာ ချက်ပြုပ်ကြပြီး (၆)နာရီထိုးသည်နှင့်နံနက်စာကိုစားသောက်တတ်ကြသည်။